Ugaaska Murusade oo guddiga farsamada ku eedeeyey iney bedeleen xildhibaankii beesha C/lle Sabti (DAAWO SAWIRO)
Ugaaska Murusade oo guddiga farsamada ku eedeeyey iney bedeleen xildhibaankii beesha C/lle Sabti (DAAWO SAWIRO). Ugaasyada iyo Odoyaasha dhaqanka ee kasoo jeeda beesha Murusade oo kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa ka soo horjeestay xildhibaanada cusub ee barlamaana Somalia oo dhawan la dhaariyay gaar ahaan xildhibaanimada Drs. Maryan Cariif Qaasin oo 12-kii sano ee la soo dhaafay majaraha u heysay kursiga beesha Cabdalle.
“Arintii dhacday wax shaqo ah kuma laheyn mana ogeyn waa nala dabamarteeyey, anigu ma saxiixin gacanteyduna ma gaarin waxaan ka war helay in ay tahay xubin baarlamanka ka mid ah oo la dhaariyey Maryan Cariif Qaasin, iyada ayaa kaligeed ismaamushay waxaana u fududeeyey gudiga farsamada cid la ogeyd ma jirto mana garan karo awoodaas halka ay ka keeneen” ayuu yiri Ugaaska beesha Murusade oo ay wajigiisa caro ka muuqatay wuxuuna sheegay in ay tahay arin aan la aqbali Karin. Ugaasku wuxuu fariin u direy beesha Cabdalle sabdi oo uu sheegay in arinta dabagal lagu sameynayo wuxuuna intaa raaciyey in awooda soo doorashada ay leeyihiin madax dhaqameydyada sida ugaasyada. suldaanada iyo Ugaasyada iyo guud ahaan 135ta xubnood ee ku jira gudiga soo xulashada xubnaha golaha Baarlamanka.
Maalin ka hor ayey ahayd markii uu madaxweyne Shariif oo la hadlayay odayaal dhaqmeedka shirka uga socda Muqdisho uu eedeeyn dusha kaga tuuray gudiga farsamada taasoo ku aadaneyd in ay isticmaalayaan awood ka badan tii loo igmaday isagoo balan qaaday in dib u eegis lagu sameyn doono liiska xildhibaanada cusub ee Soomaaliya.